Puntland oo diiday dalab kaga yimid dowladda Soomaaliya -News and information about Somalia
Home Warkii Puntland oo diiday dalab kaga yimid dowladda Soomaaliya
Wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, ayaa xalay waxaa ay magaalada Boosaaso kula kulmeen madaxweynaha maamulka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni.
Xubnaha wasiirada ee la kulmay Madaxweyne Deni ayaa waxaa ka mid ah wasiirka Arrimaha debadda Axmed Ciise Cawad, wasiirka Qorshaynta, Jamaal Xasan Maxamed, wasiirka Kalluumeysiga , Cabdullaahi Bidhaan Warsame iyo xubno kale.
Ilo xog ogaal ayaa sheegaya in in xubnahan madaxweyne Deni u soo bandhigeen in la dhameeyo khilaafka u dhexeeya xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka Puntland.
Wararka ayaa intaasi waxaa ay ku darayaan in maamulka Puntland uu diiday dalab kaga yimid wasiirada, kaasi oo ahaa in Puntland aysan ka qeyb-gelin, munaasabadda caleema-saarka madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaan oo la filayo in ay dhowaan ka dhacdo magaalada kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Sidoo kale Madaxweynaha Maamulka Puntland ayaa ka horyimid dalabkii ay hor-dhigeen wasiirada ee ku aaddanaa in aysan Puntland ka qeyb-gelin caleema-saarka madaxweynaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaam, waxaana uu si cad u sheegay in Puntland aysan cidna fasax uga weydiisan doonin ka qeyb-galka caleema-saarkaasi.
Kulankii xalay ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa waxaa uu ku soo dhamaaday natiijo la’aan, iyadoona lagu kala tagay.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo maanta furaya Kalfadhiga 6aad ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Next articleMadaxweyne Xaaf oo soo dhaweeyay guddiga farsamada dhismaha Galmudug
DEG DEG: Muwaadin Soomaaliyeed Oo Lagu Dilay Koonfur Afrika